गठबन्धनलाई ओलीले र जनतालाई पाँच दलले देखाएको त्रास ! – Main Batti
गठबन्धनलाई ओलीले र जनतालाई पाँच दलले देखाएको त्रास !
प्रकाशित मिति : २७ बैशाख २०७९, मंगलवार ०७:४८
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले त एक समाचारमा दिएको एक अन्तर्वार्ताका क्रममा कांग्रेसले आफूहरुलाई पुरस्कार दिनु पर्नेमा अहंकार देखाएको बताएसँगै गठबन्धनका दलमा शीर्ष नेताहरुबीचको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ । ‘कतिपय ठाउँमा हाम्रो अवमूल्यन गरिएको छ । हामीलाई उपयोग गर्ने सोच पनि होला । यसले हाम्रो चित्त दुःखेको छ, नराम्रो लागेको छ । तर चित्त दुखाएर बस्ने बेला होइन ‘ अध्यक्ष नेपालले भनेका छन् ।
मतदानकाे दिन वर्षाकाे प्रक्षेपण भएपछि आयाेगले भन्याे-केन्द्रमा त्रिपालकाे व्यवस्था गर्नू